Diidmada Shilin Soomaaliga ee Boosaaso oo xal laga gaaray - BBC News Somali
Image caption Shilin Soomaaliga
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada Boosaaso laga diiday qaadashada shilin Soomaaliga, waxaana taasi ka dhashay cabashooyin iyo mudaaharaadyo ay sameeyey shacabka magaalada ee danyarta ah, iyada oo ay xirmeen qaar ka mid ah goobihii ganacsiga.
Diidmada shilinka Soomaaliga ah ayaa ka dambeysey kadib markii magaalada lasoo galiyey lacag been abuur ah oo sare u qaaday sarifka lacagaha qalaad iyo qiimaha maciishada.
Balse kulan degdeg ah oo ay maanta arrintaasi ka yeesheen ganacsatada magaalada iyo mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu gaaray heshiis xaaladda caadi loogu soo celinayo.
Yaasiin Mire Maxamuud oo ah duqa magaalada Boosaaso oo BBC-da uga waramay waxa uu dhinbka ka dhashay ayaa yiri "Lacagahan waxaa laga joojiyey gobolada qaar oo ururka Alshabaab ay ku xoogganyihiin, lacagihii waa lasoo raray, si koontarabaan ah ayaa loosoo galiyey magaalada Boosaaso, sidaasina lacagtii magaalada tiiley ayaa tirada ka badatay, kadibna doolarkii ayaa kor u kacay, dadkiina waxa ay bilaabaan in ay lacagihii kala soocaan".
Dowladda Soomaaliya oo soo daabacaysa 20 kun oo shilin oo isku dhegan
Mar wax laga weeydiiyey waxa lagu heshiiyey ayuu yiri "Waxaan ku heshiiney in lacagtii shilin Soomaaliga ay caadi u socoto, tan kalana ee been abuurka ah ee boqolkii doolar lagu badalanayo 10ka milyan in la joojiyey".
Lacagta cusub ee been abuurka ah waxaa la sheegey in ay tahay mid midabkeedu doorsoomay, islamarkaasina laga dareemayo shiir xoolaad maadaamaa lagu soo dhex qariyey xoolo loo waday Boosaaso si ay halkaasi oga dhoofaan.
Duqa magaalada Boosaaso waxa uu beeniyey in ay jiraan lacago been abuur ah oo lagu daaboco magaalada Boosaaso.
Diidmada shilinka Soomaaliga ayaa horey waxa uu uga jirtey gobolada dalka qaarkood oo ay gaar ahaan meelo ay maamulaan Alshabaab iyo meelo kalaba.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in ay soo daabacayso shilin Soomaali cusub oo aanan la been abuuri karin.